Sheekada Dhalashada Marcos Llorente iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Spain Sheekada Dhalashada Marcos Llorente iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Markii uu bilaabay, waxaa lagu naaneysaa “Marco". Waxaan ku siinaynaa dabool buuxa oo ah Marcos Llorente Childhood Story, Taariikh nololeedka, Xaqiiqda Qoyska, Waalidka, Nolosha Hore, Nolosha Shakhsiyeed, Nolosha Xiriirka (xaqiiqooyinka saaxiibtinimo), Nolosha iyo dhacdooyinka kale ee xuska ah laga soo bilaabo markii uu ahaa cunug ilaa markii uu caan noqday.
Marcos Llorente Nolosha Hore iyo Sare kicinta. Dhibcaha: Instagram, AtleticoMadrid iyo FCP
Haa, qof kastaa wuu ogyahay inuu yahay kubbadda cagta oo laba yool oo waaweyn hub ka dhigista Liverpool inta lagu guda jiro waqtiga dheeriga ah ee wareegga 2019ka Champions League ee 2020/16. Si kastaba ha noqotee, in yar ayaa aqriyay Marcos Llorente's Biography oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan marka hore adiga ku siinno, oo ah kuwayada Table of Content isaga ka hor Full story.
Sheekada Carruurnimada Marcos Llorente:
Marcos Llorente Moreno wuxuu ku dhashay maalintii 30th ee Janaayo 1995 hooyadiis María Ángela Moreno, (kubbadda cagta ciyaaraha ka fariistay) iyo aabaha Paco Llorente, (ciyaartoy hawlgab ah) magaalada Madrid, Spain.
Sida ciyaartoy badan oo kubada cagta leh oo leh xididdada isboorti ee qoyska, Marcos Llorente noloshiisii ​​carruurnimada waxay ahayd mid xiiso leh. Wuxuu ku soo koray si uu u garto in waxqabadka qoyskiisa ay yihiin kuwo la iska dhaxlo oo gaar ahaan loo kaxeeyo 'hiddaha kubada cagtakaas oo qulqulaya xididadiisa sida wiil yar.
Runtu waxay tahay, xubnaha qoyska Marcos Llorente (dheere) labadaba hooyada iyo aabbaha waxay dhamaantood kuwada dhasheen Real Madrid. Little Marcos wuxuu ku koray isagoo aqoon u leh adeerayaashiisii ​​weynaa ee haystay rikoorka Real Madrid ee aan wali jabin. Sidaa darteed, waxay ka badneyd kaliya aabaha iyo aabaha wiil ee shaqeeya, xitaa adigu aabihiis wuxuu ahaa ciyaartoy hore.
Waqtigii Marcos yaraa wuxuu ahaa 3, aabihiis Paco Llorente (hoos ku sawiran) wuxuu go’aansaday inuu xirto kabahiisa. Aabe kasta oo kubada cagta ah (oo ay kujirto Paco), waxay ahayd xanuun badan in lala tacaaliyo howlgabka. Paco waligiis ma uusan dooneynin inuu noqdo midka ugu dambeeya ee kubad ku cayaari jiray geedkiisa qoyskiisa. Kubadsameeyaha howlgabku wuxuu xiriir dhow la yeeshay wiilkiisa Marcos, isagoo rajo ka qabay inuu u duceeyo si uu ugu sii noolaado riyada reerka.
Paco Llorente wuxuu xiriir adag la yeeshay wiilkiisa da 'hore. Waxa kaliya oo uu doonayay waa inuu arko wiilkiisa oo ku sii jiraya riyada reerka. Dhibcaha: Instagram
Marcos Llorente's Asalka Qoyska iyo Nolosha Hore:
Ka timid qoys isboorti oo waalidkood (aabahood), adeeradood iyo ayeeyadood ay kasbadeen lacago badan oo ay ugu soo ciyaareen Real iyo Atletico Madrid, waa cadaalad in la soo gabagabeeyo in Llorente ay u badan tahay inuu ka soo jeedo qoys qani ah / qoys sare ah.
Marcos waa wiil yar oo riyadiisa noloshiisa hore ku soo biirtay “Dawladdii Madridistas ” halkaasoo aabihiis, adeerkiis, iyo ayeeyadood ay iska lahaayeen.
Waxbarashada Marcos Llorente:
Thanks to xubnaha qoyska ee hogaaminaya tusaalooyinka, Marcos wuxuu lahaa rajadiisa hore ee ah inuu helo waxbarashada kubbadda cagta akadeemiga Real Madrid. Xitaa adigu aabihiis halkaas ayuu ka ciyaaray waqtigaas, wuxuu ogaa inuu ku qasbanaado shaqo dheeri ah taas oo ka dhigeysa kooxda reerka-Friendly Club inay ugu yeeraan tijaabooyin.
Waqtigaas, Marcos wuxuu doorbidi lahaa inuu xirto maaliyadaha Los Blancos maalin kasta si uu u xirto farsamadiisa jidadka Madrid. Go'aanka joogtada ah iyo baahida loo qabo in la raaco raadadkii adeerkiis, ayeeyooyinkiisa iyo awowgiis waligood marna uma muuqan sidii khiyaano gudbaysa.
Marcos Llorente Sawir Carruurnimo- Sannadihii hore ee kubbadda cagta. Dhibcaha: Cayaaraha
Paco Llorente ka dib markii uu ciyaaraha ka fariistay (in 1998) wuxuu ku qaatay 4 sano oo wanaagsan waxbarista wiilkiisa ficil kubadeed. Isagoo fahansan damaciisa wiilkiisa inuu ubad kubadsado si uu nolol ugu noolaado, kubada cagta fariistay ayaa sameeyay wax walba oo uu ku taageeri karo himilooyinkiisa.
Nolosha Xannaaneynta Marcos Llorente:
Halganka loogu jiro ku biiritaanka akadeemiyada Real Madrid ayaa mararka qaar la yimaada cadaadis badan iyada oo ay aad u yaryihiin dhalinyaro awood u leh inay maamuli karaan, kuwa kale si fudud maahan. Sannadkii 2002, Marcos wuxuu diyaar u ahaa inuu nolosha ku bilaabo akadeemiyad. Nasiib darrose, maahan Real Madrid oo uu hore u rajeynayay.
Halkii ay u ogolaan lahaayeen in wiilkooda Real Madrid riyooyin mustaqbalkiisa akadeemiga ah uu u weeciyo meel dhexe, waalidiinta Marcos Llorente waxay goosteen inay u oggolaadaan inuu ku biiro Las Rozas, naadi maxalli ah oo ku yaal magaalada aad ku dhalatay. Sida hoos lagu arkay, guriga Marcos Llorente ee ku yaal Las Rozas wuxuu u socday Madrid 20 daqiiqo oo keliya.
Marcos Llorente wuxuu degay Las Rozas CF halkaas oo uu kubbadda cagta ku soo ciyaaray 4 sano. Dhibcaha: Cayaaraha
Marcos wuxuu aasaaska mustaqbalkiisa ka bilaabay Las Rozas Club de Fútbol. Mahadsanid rabitaan gubasho leh si uu ugu fiicnaado akadeemiyada sare, Marcos wuxuu u sii gudbey u ciyaarista akadeemiyado kale oo iyana ah; Nueva Roceña (2006 ilaa 2007) iyo Rayo Majadahonda (2007 ilaa 2008).
Wadada loo maro Sheekada Taariikh nololeedka:
Xitaa intii uu u ciyaarayay akadeemiyadan yar, da 'yarta ayaa weli heysata go'aan adag oo ah inuu riyadiisa akadeemiga Real Madrid noqdo mid run ah. Runtu waxay tahay, waligiis kama quusan oo da ’yarka weli wuxuu rajo ka qabaa inuu ku biiro Real Madrid.
Farxadda Marcos Llorente waalidiinta iyo xubnaha qoyska (gaar ahaan aabihiis) waan ogaa inaysan jirin wax xaddidan waqtiga ay iyagu iska leeyihiin kaliya looguma yeerin Real Madrid laakiin waxay ka gudbeen tijaabooyinkooda akadeemiyadeed.
Marcos Llorente inta lagu gudajiray sanadihii hore ee akadeemiga Real Madrid wuxuu noqday mid xiise leh whiz kid. Wuxuu ahaa nooca da 'yarta ee lagu barakeeyey xakameynta kubbad isku dheellitirka iyo iskudhafka ku dhufashada kooxihii ka horreeyey. Marcos wuxuu si dhaqso leh u koray akadeemiga Real Madrid sida ugu dhaqsaha badan isagoo ka horyimid dhamaan noocyada ka soo horjeeda. Xitaa wuxuu noqday wixii u muuqday kabtanka kooxdiisa dhalinyarada.
Da 'yarta Marcos ee Real Madrid Academy. Dhibcaha: Instagram
Marcos Llorente Taariikh nololeed- Rise sheeko caan ah:
Ka dib markii uu si wacan u soo jiitay kooxda Real Madrid ee Juvenil, Marcos waxaa loo dalacsiiyay Real Madrid B Zinedine Zidane kaasoo waagii hore ahaa macalinka kooxda juunyeerka Real Madrid.
Sannadkii 2017 wuxuu arkay ciyaaryahanka qadka dhexe isagoo garbaha ka buuxinaya ciyaartoy ka tirsan kooxda waa weyn ee Real Madrid - iyo wixii la mid ah Mariano, Isco, Modric iyo Kroos. Xilligaas 2017-2018, Marcos Llorente wuxuu gacan ka geystey ka caawinta kooxda inay ku guuleysato UEFA Champions League, Super Cup iyo FIFA Club World Cup halkaas oo uu ku guuleystay ninka abaalmarinta ciyaarta.
20-ka Juun 2019, xiddigga qadka dhexe wuxuu dareemay inuu sifiican u qabtay oo uu ubaahan yahay waqti fiican si uu u go'aansado inuu ku biiro kooxda ay xafiiltamaan ee Atlético Madrid. Su'aalo badan ayaa go'aankiisa iska dhigaya, iyagoo u tixraacaya qaab ka leexasho qiyamka kubada cagta ee qoyskiisa.
Sida wakhtigii qorista Marcos Llorente's Biography, qadka dhexe ayaa loo sheegay Ka koraan xoog ilaa xoog mahad leh tayadiisa iyo maalin gaar ah. Isagoo ka hadlaya maalin gaar ah, psi farxad leh 11-Mar-Mar 2020, Marcos wuxuu soo qaatay naaneys cusub “Addoonsiga Liverpool". Tan naanaysta mahadsanid laba gool oo jabay qalbiga taageerayaasha Liverpool. Marcos Llorente ayaa u diray kooxda heysata horyaalnimada Yurub ee 2018/2019 inay iska dirto wareega isreebreebka Champions League ee 2019/2020.
Shaki la'aan, waalidiinta Marcos Llorente ayaa ku faanaya inay arkaan wiilkooda oo ku sii jiraya dhaxalka kubada cagta qoyskooda. Isla markiiba indhahayaga hortooda, waxaa suuragal ah inaan qarka u saaran nahay inaan aragno da 'yar kale oo ubaxyo u noqday xirfad heer caalami ah. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Marcos Llorente Gabadh ?:
Llorente kor u qaadida caannimada ayaa la arkay taageerayaasha ayaa loo soo qaatay internetka si ay u ogaadaan haddii uu qabo gabar saaxiib ah ama, haddii uu dhab ahaan guursado taas oo ka dhigan, inuu haweeney qabo. Runtu waxay tahay, wixii ka dambeeya kubbada cagta guuleysta, waxaa jira gabar saaxiibtinimo oo qurux badan oo magaca ku baxda Patricia Noarbe.
La kulan Marcos Llorente Gabadha Gabadha ah- Patricia Noarbe
Waa kuma Patricia Noarbe? - Gabadha Marcos Llorente:
Waxaa badanaa loogu yeeraa qof leh “Quruxda iyo maskaxda ". Patricia waa guruhu jimicsi iyo aqoonsi heersare ah. Quruxda Spanish-ka ee layaabka leh ayaa heysata shahaadada labo-labo ee Sharciga iyo Maamulka Ganacsiga & Maamulka.
Patricia waxay ku takhasustay bixinta tababarka jimicsiga macaamiisha dibedda iyo khadka tooska ah. Waxay leedahay "www.paddyness.es", Bog internet ah oo bixiya tababbarka jimicsiga iyo talooyinka cuntada, gaar ahaan ciyaaraha fudud.
Ma ogeyd?… Patricia Noarbe ayaa ah sababta kaliya ee keentay in kubaddii Marcos Llorente ee Man United aysan waligeed dhicin. Sida laga soo xigtay Daily Star, Marcos wuxuu rabay saaxiibtiis inay dhameyso waxbarashadeeda jaamacadeed kahor inta aysan go'aan ka gaarin mustaqbalkiisa.
Patricia Noarbe waa qof aan is jeclayn oo aan wax kale qabanin marka laga reebo bixinta taageero niyadeed ninkeeda. Sawirka hoose, waa la arkay U dabaaldegaya daqiiqaddii saaxiibkeed keligiis ay si hoose u soo dejisay Liverpool.
Patricia Noarbe waxay u dabaal degeysaa daqiiqaddii saaxiibkeed ay hoos u dhigtay Liverpool. Dhibcaha: IG
Mid ka mid ah labada qof ee ay jecel yihiin xilliga xagaaga waa jasiiradda Isbaanishka iyo biyaha Ibiza. Xukunka habka labaduba is jecel yihiin, waxay u badan tahay in “guurkaWaxay noqon kartaa talaabadooda rasmiga ah ee xigta.
Marcos Llorente wuxuu waqti wanaagsan la qaadanayaa saaxiibtiisa iyo afadiisa si ay u ahaadaan. Dhibcaha: Instagram
Marcos Llorente Nolosha Qofka:
Ciyaartoyda jecel kubada cagta, sida kuwa kale oo inaga mid ah, waxay jecel yihiin xayawaankooda xayawaannada, Marcos Llorente ma aha wax ka reeban. Xitaa adigu waxaa jira odhaah ah inuusan jirin wax daacada ah oo ka haray ciyaarta casriga ah, runtii ma tixgelinayso xiriirka ka dhexeeya Marcos iyo eeygiisa (KD).
La kulan Dogs ee Marcos Llorente. Dhibcaha: Instagram
Marka la soo koobo, Marcos Llorente waa horusocod, asal, madax-bannaan, iyo eey-saaxiibtinimo. Isagu ma necbaa xadadka, ballamaha la jebiyey, keli ahaanta iyo caajisnimada ama xaaladaha caajiska.
Marcos Llorente Hab-nololeedka:
Iyadoo lagu qiimeeyay qiyaastii 12 milyan euro iyo qiime suuq ah oo ka badan 30 milyan euro, waa caadi in la yiraahdo Marcos shaki la'aan waa milyaneer.
Si kastaba ha noqotee, markay noqoto lacag, Marcos wuxuu leeyahay karti uu ku ilaaliyo isku dheelitirka kharashka iyo kaydinta. Isagoo ka hadlaya kharashka, hal shay ayaa hubaal ah (Gaarigiisa). Halkan waxaa ah Marcos sawirka gadaashiisa taariikhadan quruxda badan ee Audi, gaariga uu doortay.
Marcos Llorente Car- Waxay umuuqataa inuu taageere u yahay Audi. Dhibcaha: Instagram
Marcos Llorente Nolosha Qoyska:
Ka hadlida taariikhda qoyska, waxaa muhiim ah inaad adiga ku ogeysiiso guud ahaan, qaraabadiisa waxay u cayaareen in kabadan 1100 kulan Real Madrid, kana qeyb qaateen taariikhda kooxda. Qeybtaan, waxaan kuugu soo qaadan doonaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan waalidiinta Marcos Llorente iyo xubnaha kale ee qoyskiisa.
Ku saabsan aabaha Marcos Llorente:
Francisco 'Paco' Llorente Gento wuxuu ku dhashay maalinta 21aad ee May 1965 magaalada Valladolid, Spain. Waa ciyaartoy howlgab ah kaasoo inta badan u ciyaara garabka midig ee Real iyo Atletico Madrid. Hoos waxaa ku yaal sawirka Paco Llorente inta uu ku sugnaa Atletico Madrid halkaasoo wiilkiisa (wakhtiga qorista) kubadiisa ayuu ciyaarayaa.
La kulan Marcos Llorente aabihiis- Paco Llorente maalmihii uu ka ciyaarayay Atletico iyo Real Madrid. Sawirka Sawirka: AS, MundoDeportivo iyo Kubadda Cagta Maanta iyo Maanta
About Marcos LlorenteHooyo:
Sida ninkeeda iyo wiilkeeduba waxay sidoo kale qortay cutubkeedii isboorti. Llorente hooyadeed María Ángela waxay ciyaari jirtay kubbadda koleyga inta lagu gudajiray Raiisel wasaare. Tani waxay ahayd haweeney isboorti oo ku nooleyd sumcaddii magaca Llorente.
In badan oo ku saabsan Marcos LlorenteAdeerayaasha:
Ma jiraan ereyo ku filan oo lagu sharraxo heerka wanaagsan ee Paco Gento kaasoo ah adeerka weyn ee Marcos Llorente oo ka soo jeeda aabihiis. Badanaa waxaa lagu calaamadeeyaa "Ninka leh koobka aruurinta koobabka“, Paco waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah garabka bidix ee ugu fiican weligiis sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu waa weyn Madridistas taariikhda Real Madrid..
La kulan Marcos Llorente adeerkiis, Paco Gento, oo ah halyeey kubada cagta ah. Dhibcaha: Dhexdhexaad
Wuxuu ku dhashay 21-kii Oktoobar 1933, weeraryahanka Real Madrid wuxuu heystaa rikoor ah inuu yahay hogaamiyaha kooxda marwalba u safta waana ninka kaliya ee ku guuleystay lix Koob Adduun.
Paco Gento wuxuu qeyb ka ahaa kooxdii halyeeyada kooxda oo ay ka buuxaan Di Stéfano, Kopa, Puskas iyo ciyaartoy kale oo aad u fiican. Intii lagu jiray 18-ka xilli ciyaareed ee uu joogay Real Madrid, wuxuu la qaaday 12 horyaal oo La Liga ah iyo lix koob oo yurub ah.shan ka mid ah waa isku xigxiga). Tani waa ilaa maanta, diiwaangelin aan kala go 'lahayn. Hoos waxaa ku yaal muuqaal gaaban oo Paco ah inta lagu guda jiro maalmihiisa ciyaarta.
Marcos Llorente adeerkiis- Paco Gento ayaa ku jira tallaabo. Dhibcaha: Realmadrid
Kuwa kale ee adeeradii Marcos LlorenteWalaalaha ayeeyadiisa awoowe) ku dar waxyaabaha soo socda;
(1) Julio Gento (kubada cagta): Sidoo kale wuxuu ahaa kubadsameeye (difaac) kaasoo mar u soo ciyaaray Real Madrid. Wuxuu lix sano ka yaraa walaalkiis Paco (sawirka kore).
(2) Antonio Gento (kubada cagta): is walaalki ka yarna waa Gento iyo Julio. Wuxuu sidoo kale ahaa weeraryahan intii uu noolaa.
Saddexda nin ee walaalaha ah waxay lahaayeen walaasheed oo la yiraahdo María Antonia Gento. Ma ogeyd?… Afarta wiil ee ku xirnaa Real Madrid, mid ka mid ah waa aabihiis Marcos Llorente. Afarta wiil ee Maria waxaa ka mid ah; Joe Llorente, Toñín Llorente, Paco Llorente (Marcos Llorente aabihiis) iyo Julio Llorente.
In badan oo ku saabsan Marcos LlorenteAwoowe:
Ramon Grosso waa Marcos Llorente hooyadiis oo mar u ahayd kubbada cagta Real Madrid. Ma ogeyd?... Ramon wuxuu dhaxlay funaanada lambarka 9aad ee Real Madrid Alfredo Di Stefano wuxuuna u qaaday 1966 koobka qaramada yurub isagoo ka garab yimid Gento.
Grosso wuxuu lahaa shan caruur ah midkoodna gabadhiisa Maria Angela, oo markii dambe guursaday Paco Llorente (Marcos aabbe).
La kulan Marcos Llorente awoowe, Ramon Moreno Grosso. Dhibcaha: Realmadrid iyo Pinterest
Ramón Grosso Foundation waxaa aasaasay carruurta Ramon Grosso si ay u sharfaan aabahood. Mu'asasada waxay ka fulisaa howlo samafal dalka Chad iyo meelo kale.
Marcos Llorente Xaqiiqda Aan La Sheegin:
Xaqiiqda #1: Isaga oo Geedka Qoyska Xiddigaha Real Madrid:
Uma baahna xaqiijin dambe oo ah in xadka dhiigga ee waalidiinta Marcos Llorente “Dawladii Madridistas ”. Halkan waxaa ah geed abtirsiinyo oo leh dhammaan magacyada Madridistas ee ku jira qoyska Gento-Llorente-Grosso.
Geedka Qoyska Marcos Llorente. Dhibcaha: RealMadrid
Xaqiiqda #2: Ataliyo hal mar ayaa shaqaaleysiisay:
Waxaas oo dhami waxay dhacday 2007 markii Atletico oo ka yarayn ciyaartoy akadeemiyadeed koox da 'gaar ah. Naadiga waxaa qasab ku aheyd inay shaqaaleysiiso Marcos si uu ugu ciyaaro iyaga oo matalaya tartanka Gandia. 12-sano jir Marcos Llorente isla waqtigaas wuxuu ahaa kubbadda cagta akadeemiga kooxda EF Roceña, koox yar oo ka dhisan magaaladiisa, Las Rozas. Miyaad ka arki kartaa sawirka hoose?
Marcos wuxuu matalay kooxda Atletico Madrid markii uu ahaa da'da 12-ka. Dhibcaha: Lala
Koobkii kadib, Marcos halkii uu ku biiri lahaa kooxda Atletico waxa uu raacay talaabadii qoyskiisa, oo ah muuqaal uu ku soo biiriyey akadeemiga Real Madrid.
Xaqiiqda #3: Mushaharka Mushaharka:
Tan iyo markii ay ku soo biireen Atlético Madrid, taageerayaasha wax weydiinaya waxay bilaabeen inay ka baaraandegaan xaqiiqda Marcos Llorente, sida inta uu kasbado kooxda.
Bishii Luulyo 2019, Marcos Llorente wuxuu heshiis la galay kooxda Atletico Madrid, kaasoo u arkay inuu jeebka ka qaadanayo mushahar dhan € 2,100,000 sanadkii. Jebinta mushaharka Marcos Llorente (tirakoobka 2019) ee tirooyinka yar yar, waxaan heysanaa waxyaabaha soo socda:
Dakhliga Euros (€)
Dakhliga Pound Sterlings (£)
Daqliga Maraykanka Doolar ($)
Dakhliga sanadkii € 2,100,000 £ 1,970,430 $ 2,286,312
Daqliga bishiiba € 175,000 £ 164,202.5 $ 190,526
Daqliga usbuucii € 43,750 £ 41,051 $ 47,631
Daqli maalintiiba € 6,250 £ 5,864 $ 6,804.5
Dakhliga halkii saac € 260 £ 244 $ 283.5
Daqliga daqiiqaddii € 4.3 £ 4.07 $ 4.7
Lacag-bixintii Halkii Sekan € 0.07 £ 0.06 $ 0.08
Tani waa inta uu ku soo qaatay Marcos Llorente tan iyo markii aad bilaawday daawashada Boggan.
Haddii waxa aad kor ku aragto ay akhriyaan (0), waxay ka dhigan tahay inaad fiirineysid bog AMP ah. Hadda Riix HALKAN si loo arko mushaarkiisa oo kordhiyay ilbidhiqsiyo.
Ma ogeyd?… Celcelis ahaan ninka reer Spain ee shaqeeya € 1.889 Yuuro bishii waxay u baahan tahay inay shaqeyso ugu yaraan 7.7 sano si loo kasbado € 175,000 taas oo ah lacagta Marcos ay hesho 1 bil.
Xaqiiqda #4: Marcos LlorenteTattoos:
Lahaanshaha dhaxalka qoyskiisa ee dhiigiisa ayaa kaliya ugu filan kubada cagta Spain. Marcos, sida hoos ku xusan, ma rumeysto waxa loo yaqaan “Dhaqanka Tattoo". Wuxuu doorbidi lahaa inuu muujiyo xididdada jirkiisa hoose halkii uu adduunka u oggolaan lahaa inuu sawiro jirka.
Marcos Llorente wuxuu helay dawooyin ka sarreeya awoodaha mana aaminsana Tattoos waqtiga qoraalka
Xaqiiqda #5: Marcos LlorenteDiinta:
Xaqiiqada ah in qaar ka mid ah xubnaha qoyskiisa (oo ay ku jiraan kuwa la dheereeyey) ay dulqaad muujiyaan Magacyada Masiixiyiintu waxay ina siinayaan sabab badan oo aan aaminsanahay suurtagalnimada waalidiinta Marcos Llorente inay ku barbaaraan iyadoo la raacayo diinta masiixiga. Xitaa ka fikirkiisa arrimaha iimaanka wuu hooseeyaa, arimaheenna waxaa u wanaagsan Marcos inuu yahay Masiixi ah.
Xaqiiqda Taariikh nololeedka:
Magaca buuxa: Marcos Llorente Moreno.
Taariikhda Dhalashada: 30 Janaayo 1995.
Age: (25 sida Maarso 2020).
Shaqada: Kubad sameeyaha (khadka dhexe).
Waaliddiinta: Maria Angeles Moreno (Hooyo), Paco Llorente (Aabe).
Aabo hooyadaa: Ramon Grosso.
Awooweyaasha Aabayaasha: Antonia Genco iyo Jose Llorente.
Unugyada Waaweyn ee Super: Paco Gento, Julio Gento,
iyo Antonio Gento
Abtiga Joe Llorente, Tonin Llorente iyo Julio Llorente.
Dhererka: 1.84 m (6 ft 0 gudaha)
Calaamadaha Zodiac: Aquarius.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay akhriskayaga Taariikhda Dhalashada Marcos Llorente Plus Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.
Sheekada Carruurnimada Ferran Torres Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold
Sheekada Carruurnimada Mariano Diaz iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Achraf Hakimi Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Dani Danimo Childhood Story Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada ee Dani Parejo Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Caruurnimada ee Adama Traore Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Ansu Fati Plus Xaqiiqooyinka Uurka Bixin La'aanta
Rodrigo Hernandez Storyhood Plus Xaqiiqooyin Wada-hadal ah
Iker Casillas Sheeko Xeelad ah oo Xogta Loo Yaqaano
Gerard Deulofeu Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer
Juan Bernat Story Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Thiago Alcantara Sheeko dheereeya Xogta Warka Xogta
Marcos Alonso Sheeko Carcin Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan
Brahim Diaz Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan
Bojan Krkic Sheeko Xeel dheer oo Xogta Lahaa Xuruufta